November 2018 – Yezin Agricultural University | Official Website
စိုက္​ပ်ိဳး​ေရးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရမ်ားအသင္း၏ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ ႏွိဳးေဆာ္စာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕ရမ်ားအသင္း၏ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္၊ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရမ်ားအားလံုး မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၅) ရက္ႏွင့္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၅) ရက္ (စေန) ေန႔မ်ား တြင္ ေန႔လည္ (၂) နာရီ သတင္းအၿပီး၌ MRTV4တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ႏွင့္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Sky...
AUAA Annual Conference
Invitation to Dr. Nang Hseng Hom’s Seminars
Dear All of Professors, Heads of Departments, Teachers, Post graduate students and fourth year students from Yezin Agricultural University, you are cordially invited to attend the seminars of Dr. Nang Hseng Hom (Rector, Yezin Agricultural University) with the topic, “Experience on education and research”. When – 28-11-2018 (Wednesday) Time – (08:30 AM) Where – Auditorium, Yezin...
ကြေညာချက်အမှတ်(၃၅ /၂၀၁၈) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၉)ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက် ပါရဂူနှင့် မဟာသိပ္ပံသင်တန်း (ACARE) တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနနှင့် ပညာရေးဗဟိုဌာန (ACARE)၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည့် ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (First Semester)၌ ပါရဂူ(Ph.D.) နှင့် မဟာသိပ္ပံ (M.Agr.Sc.)သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (First Semester) ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသည် ကျောင်းအပ်နှံခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၉)ရက်နေ့ အထိ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် သင်တန်းစတင်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity/
(၄၂)ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာအောင်မြင်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၄၂)ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ဤတက္ကသိုလ်သို့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် တတိယနှစ် (B.Agr.Sc.) သင်တန်းသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်ကြေး၊ ကျောင်းလခနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၃)ရက်နေ့အထိပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity
Final year result 2017-2018
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော နောက်ဆုံးနှစ် (B.Agr.Sc.) သင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ (B.Agr.Sc.) သင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စားရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ Read all Pages https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity
Invitation to Prof. Yoshinori YAMAMOTO’s Seminars
Seminar Invitation Dear All of Professors, Heads of Departments, Teachers from Yezin Agricultural University, You are cordially invited to attend the seminars of Prof. Yoshinori YAMAMOTO with the topic, “Three Years in Yezin Agricultural University asaLong-Term Expert of JICA TCP”. When – 13-11-2018 (Tuesday) Time – (02:00 PM) Where – Diamond Jubilee Meeting...
Ph.D and M.Agr.Sc. Announcement
ကြေညာချက်အမှတ်(၂၉ /၂၀၁၈) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၂)ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည့် ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (First Semester)၌ ပါရဂူ၊ မဟာသိပ္ပံသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (First Semester) ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများသည် ကျောင်းအပ်နှံခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့မှ(၂၃)ရက်နေ့ အထိ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် သင်တန်းစတင် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity
Ph.D, M.Agr.Sc., M.Phil Announcement
ကြေညာချက်အမှတ်(၂၈ /၂၀၁၈) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၂)ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည့် ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (First Semester)၌ ပါရဂူ၊ မဟာသိပ္ပံ၊ မဟာဒဿနနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (First Semester) ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများသည် ကျောင်းအပ်နှံခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့မှ(၂၃)ရက်နေ့ အထိ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် သင်တန်းစတင် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂၈/၂၀၁၈)၊ ၁၃၈၀...
First Year (External) Result
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ကြေညာချက်အမှတ် (၂၅/၂၀၁၈)၊ ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၉)ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂)ရက် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပထမနှစ် (ပြင်ပ) (B.Agr.Sc.) သင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၂၅/၂၀၁၈)၊ ၁၃၈ဝျပည့္ႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၉) ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမႏွစ္ (ျပင္ပ) (B.Agr.Sc.) သင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity